Ny helikoptera sy ny fiaramanidina dia nifandona tao afovoan-tany tany Arizona ka nahafaty olona 2
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Ny helikoptera sy ny fiaramanidina dia nifandona tao afovoan-tany tany Arizona ka nahafaty olona 2
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny zoma maraina teo no nitrangan'ny fifandonana teo akaikin'ny seranam-piara-manidina Chandler Municipal, izay misy any amin'ny tanàna ambanivohitry ny renivohitr'i Arizona, Phoenix.
Fifandonana anelanelan'ny helikoptera sy fiaramanidina elatra raikitra no nitranga teny akaikin'i McQueen sy Queen Creek tany Arizona.
Afaka niantsona soa aman-tsara ny fiaramanidina saingy nianjera ilay helikoptera ary nirehitra ary nahafaty olona 2 tao anatiny.
Ny fianjerana mahatsiravina dia nitranga telo volana taorian'ny lozam-pifamoivoizana kely hafa tao amin'ny Chandler Municipal Airport.
Helikoptera sy fiaramanidina kely no nifandona teo amin'ny seranana akaikin'ny Chandler Municipal Airport tao Arizona.
Ilay helikoptera nidina tany akaikin'ny seranam-piaramanidina monisipaly Chandler any Arizona
Nahavita nilatsaka soa aman-tsara ny fiaramanidina, fa ny angidimby kosa nianjera ary nirehitra afo.
Maty avokoa ireo mpitaingina angidimby, raha nandeha tsy naninona kosa ireo mpandeha fiaramanidina.
Ny zoma maraina teo no nitrangan'ny fifandonana teo akaikin'ny seranam-piaramanidin'i Chandler, izay misy tanàna manodidina Arizonarenivohi-panjakana renivohitra Phoenix.
Ny Lehiben'ny tafika mpamono afo Chandler Keith Welch dia nanamafy fa olona roa tao anaty angidimby no maty, raha ny mpandeha ny fiaramanidina, fiaramanidina entin'ny propeller mora entina, dia tsy nitaky fikarakarana ara-pitsaboana.
Tsy nisy naratra ny olona teny amin'ny tany.
Tsy mazava ny toe-javatra niseho, ary ny polisy Chandler dia niantso antso ho an'ny vavolombelona sy horonantsary horonantsary momba ilay tranga.
Ny sary nozarain'ny mpanao gazety eo an-toerana taorinan'izay dia mampiseho ny fiaramanidina amin'ny fijanonana eo amoron-dalambe iray, izay toa tsy mandeha tsara mihitsy.
Ny sarimihetsika misaraka dia mampiseho ny sisa tavela amin'ny angidimby amin'ny ilay toa fako maloto, rakotra ampahany amin'ny labasy vita amin'ny mpiasa vonjy maika.
Ny fianjerana mahatsiravina dia nitranga telo volana taorian'ny lozam-pifamoivoizana kely kokoa tao amin'ny Chandler Municipal Airport. Tamin'ny volana jolay lasa teo, ny motera Beechcraft Bonanza B36 iray misy motera iray izay nianjera tamina olona efatra dia nianjera ary may vetivety taorinan'ny fiaingana, nandefa olona iray tany amin'ny hopitaly ary nandratra ireo telo hafa.